माइग्रेनः ज्यान लिँदैन तर, कष्टकर बनाउँछ जीवन ! निर्मूल होइन नियन्त्रण मात्र सम्भव ~ डा. रागेश कर्ण - Riddle Nepal
माइग्रेनः ज्यान लिँदैन तर, कष्टकर बनाउँछ जीवन ! निर्मूल होइन नियन्त्रण मात्र सम्भव ~ डा. रागेश कर्ण
By santosh On Sep 5, 2018
माइग्रेनको समस्या संसारभर धेरैलाई छ । नेपालीहरु पनि यसबाट अछुतो छैनन् । नेपालमा करिब १८ प्रतिशत महिला र १४ प्रतिशत पुरुषलाई यो समस्या रहेको पाइन्छ ।
हर्मोनको गडबडी, गर्भनिरोधक चक्की ओसी पिल लगायतको सेवनका कारण यो रोगको जोखिम पुरुषको तुलनामा महिलालाई बढि हुन्छ । माइग्रेन घातक नभएपनि पटकपटक दोहोरिनाले मानिसको दैनिक जीवनलाई समेत प्रभावित पार्छ । त्यसैले यसबारे जान्न तथा बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ ।
सामान्य टाउको दुखाई र माइग्रेन
टाउको दुखाई आफैंमा एउटा लक्षण मात्र हो । यसले विशेष कुनै रोगलाई इंगित गर्दैन । कफी खाने मान्छेले कफी समयमा पाएन भने पनि टाउको दुख्नसक्छ । जसलाई चिकित्सकीय भाषामा ‘कफी वीथड्रअल हेडेक’ भन्ने गरिन्छ । रुघाखोकी, भाइरल ज्वरोका कारण पनि टाउको दुख्न सक्छ ।
राति अबेरसम्म मदिरा सेवन गर्ने मानिसलाई भोलिपल्ट टाउको दुख्नसक्छ, जसलाई ‘ह्याङ्गओभर हेडेक’ भन्ने गरिन्छ । यो सामान्य टाउको दुखाई हो । यसको उपचार घरमै बसेर गर्न सकिन्छ । आराम गरेर, पर्याप्त मात्रामा झोलिलो पदार्थको सेवन गरेर, प्रशस्त मात्रामा पानी पिएर तथा टाउको दुखाई कम गर्ने औषधिहरु सेवन गर्दा सामान्य टाउको दुखाइ ठीक हुन्छ ।
तर, यस्तो सामान्य र गम्भीर खालको टाउको दुखाईबीचमा भेद सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।
सामान्यतया टाउको दुखाई तीन प्रकारका हुन्छन्ः
त्यसमध्ये माइग्रेन एक विशेष प्रकारको टाउको दुखाई हो ।
हाम्रो प्राक्टिसका क्रममा ७/८ वर्षका बच्चादेखि ५०/६० वर्षका प्रौढ मानिसलाई पनि माइग्रेनको समस्या देखिएको छ । जबकी माइग्रेन विशेषगरी १५ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसलाई धेरै हुने गर्छ । यो समस्या एकपटक सुरु भएपछि लाइफटाइम दुःख दिन्छ । तर, सावधानी अपनाएर सही उपचार गरेको खण्डमा कष्टकर हुँदैन । नत्र यसले धेरै पीडा दिनसक्छ ।
सामान्यतया माइग्रेन हेडेक सुरु भएपछि न्युनतम चार घण्टादेखि अधिकतम ७२ घण्टासम्म रहन्छ । एकैछिन आउने, हराउने हुँदैन । माइग्रेन सुरुमा कम पीडादाइ भए पनि विस्तारै दुखाई बढ्दै जान्छ ।
पहिलोपटक कडारुपमा टाउको दुखेको छ भने पनि माइग्रेन नहुन सक्छ । तर, पटक–पटक दोहोरियो, कम्तिमा पाँचपटक एउटै किसिमको लक्षण देखियो र दुखाई चारदेखि ७२ घण्टासम्म कायम रह्यो भने माइग्रेन भएको आशंका गर्न सकिन्छ ।
माइग्रेन विभिन्न कारणले हुन्छ । कसैमा वंशाणुगत कारणले पनि हुनसक्छ । आमाबुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी लगायतका परिवारका कुनै सदस्यमा छ भने पनि यो समस्या देखिनसक्छ ।
तनावपूर्ण जीवनशैली, अस्वस्थकर खानपान, आणुवंशीक कारण तथा वातावरणाीय कारणले पनि यो समस्या निम्तिन सक्छ ।
माइग्रेन के कारणले हुन्छ भन्दा पनि के कारणले बढ्छ भन्ने कुरा जान्न जरुरी छ । किनकी माइग्रेनको समस्या हुनु एउटा कुरा हो तर, त्यसलाई बढाउनु अर्को कुरा हो । थुप्रै तत्वले माइग्रेनलाई बढाउने हुँदा हामीले उपचारका क्रममा त्यस्ता कुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
यदि जीवनशैली व्यवस्थित र संयमित छैन भने पनि माइग्रेन हुने उमेर समूहका मान्छेलाई यसले अट्याक गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि माइग्रेनका विरामीलाई कम्तीमा ६ देखि आठ घण्टा सुत्ने सल्लाह दिइन्छ । किनकी आवश्यकता भन्दा धेरै वा कम सुताईले पनि टाउको दुख्ने समस्या निम्तिन सक्छ ।
त्यस्तै समयमा खाना नखाने वा समयमा खाना खान नपाउनाले पनि माइग्रेनको अट्याक हुनसक्छ । चर्को घाम, अत्याधिक चिसो, लाउड स्पिकरको आवाज तथा भीडभाडमा जाँदा पनि धेरैलाई माइग्रेन हुनसक्छ ।
फूलको गन्ध, डियोड्रन्ट लगायत परफ्युमबाट निस्कने कडा गन्धका कारण पनि कयौंलाई टाउको दुख्नसक्छ ।
नियमित जीवनशैलीमा खाने समय, सुत्ने, मनोरञ्जन गर्ने तथा काम गर्ने समय एकदम व्यवस्थित हुन जरुरी छ । यसमा धेरै उथलपुथल ल्याउनु हुँदैन । जस्तो कि कहिले १० बजे सुत्ने, कहिले १२ त कहिले २ बजे सुत्ने बानी छ भने त्यो हटाउनुपर्छ
त्यसबाहेक लामो समयसम्म टिभी तथा मोबाइल हेरेमा वा कम्प्युटरमा बसेमा पनि टाउको दुख्नसक्छ । त्यस्तै मदिराको सेवन लगायत अन्य खानपानले पनि माइग्रेनको अट्याक बढी हुनसक्छ ।
खानेकुरा त्यसमा पनि विशेष गरेर अमिलो खानेकुरा (साँधेको अमिलो, तामा, गुन्द्रुक, दही, मही, सिसीको अचार, पानीपुरी, तितौरा) लगायतको सेवनले पनि माइग्रेनको अट्याक बढाउन सक्छ ।
त्यस्तै, अजिनोमोटो भएका खानेकुरा (फास्टफुड, नुडल्स) लगायतको सेवनले पनि माइग्रेनको अट्याक आउने सम्भावना उच्च हुने गर्छ । त्यसबाहेक आवश्यकता भन्दा बढी मात्रामा कफीको सेवन र चीजको सेवनले पनि माइग्रेनको समस्या उच्च हुनसक्छ ।
माइग्रेन अट्याक कम गर्ने तीन महत्वपूर्ण उपाय छन् । पहिलोः जीवनशैलीमा ल्याउने परिवर्तन नै हो ।
हाम्रो जीवनशैली नियमित हुन जरुरी छ । नियमित जीवनशैलीमा खाने समय, सुत्ने, मनोरञ्जन गर्ने तथा काम गर्ने समय एकदम व्यवस्थित हुन जरुरी छ । यसमा धेरै उथलपुथल ल्याउनु हुँदैन । जस्तो कि कहिले १० बजे सुत्ने, कहिले १२ त कहिले २ बजे सुत्ने बानी छ भने त्यो हटाउनुपर्छ ।
मदिरा पिउने बानी छ भने बन्द गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यमा असर गर्ने अन्य कुराहरुबाट समेत आफूलाई जोगाउनु पर्छ । हुन त यो गर्नु, यो नगर्नु भन्दैमा सबैले यी कुरालाई पूर्णतया व्यवहारमा उर्तान त सकिँदैन । तैपनि, यससम्बन्धी ज्ञान हुँदा यसको अट्याकलाई कम गर्न सकिन्छ ।
माइग्रेनको पूर्ण उपचार छैन । यद्यपि निश्चित उपचार विधि अपनाएर यसलाई कम गर्न सकिन्छ । बारम्बार अट्याक भइरहेमा विभिन्न किसिमको औषधि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा मात्र हैन कि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा माइग्रेनलाई पूर्णरुपमा निर्मुल गर्न सकिँदैन ।
तर, कुनै मानिसलाई महिनामा चार पटकभन्दा बढी टाउको दुख्छ, १२ घण्टाभन्दा बढी दुख्छ, एकैचोटी दुख्छ तर, असह्य पीडा हुन्छ र केही काम गर्न सकिँदैन भने त्यसबेला औषधि चलाउन आवश्यक हुन्छ । एकपटक औषधि चलाइसकेपछि कम्तीमा तीन महिनादेखि ६ महिनासम्म सेवन गर्नु पर्छ ।
कहिलेकाहीँ त्यो भन्दा बढी पनि औषधि चलाउनु पर्ने हुनसक्छ । लामो समय औषधि चलाउँदा माइग्रेन अट्याक आउने प्रक्रिया क्रमशः रोकिँदै जान्छ । परिणामस्वरुप, अर्को दुई/चार वर्ष माइग्रेनको समस्या नहुन सक्छ वा भए पनि मध्यम खालको अट्याक मात्र आउनसक्छ ।
जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सके पनि यो समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मेडिटेसन हो ।
मेडिटेसनले पनि टाउको दुख्ने फ्रिक्वेन्सीलाई कम गर्छ तर। यस्ता कुनै पनि कुराले माइग्रेन निर्मुल गर्न भने सक्दैन । यिनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र हो । नियन्त्रण गर्न सके मात्र पनि धेरै राम्रो हुन्छ ।
माइग्रेनको राम्रो पक्ष पनि छ । राम्रो यस मानेमा कि यसले खतराको जनाउ दिन्छ । तपाईको जीवनशैली तल–माथि हुनासाथ यो अट्याक आउनसक्छ । यस मानेमा माइग्रेनले जोगाउँछ ।
कतिपय मानिसलाई माइग्रेनकै कारण एञ्जाइटी, डिप्रेशन हुनसक्छ । कतिपयलाई फोविया, प्यानिक अट्याक लगायतका समस्या उत्पन्न हुन्छ । तथापि, माइग्रेन आफैंले ज्यान लिँदैन
माइग्रेन सम्बन्धी थुप्रै लेखहरु लेखिएको छ । तर, यसले ज्यानै जाने भन्ने हुँदैन । बरु स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनलाई प्रोत्साहित गर्छ । जसले गर्दा अरु रोग लाग्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ ।
अन्यथा माइग्रेनको अट्याकले जीवन कष्टकर बन्नसक्छ । कतिपय मानिसलाई माइग्रेनकै कारण एञ्जाइटी, डिप्रेशन हुनसक्छ । कतिपयलाई फोविया, प्यानिक अट्याक लगायतका समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
तथापि, माइग्रेन आफैंले ज्यान लिँदैन । केही प्रतिशत मानिसलाई आणुवंशीक कारणले गर्दा फेमिलियल हेमिप्लेजिक माइग्रेन हुने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ । यसबारे किताबमा त धेरै पढिएको छ, तर व्यवहारमा देखिएको छैन । मैले हजारौं विरामीको उपचार गरिसकेको छु, तर। त्यस्तो विरामीमा भेटेको छैन । त्यो माइग्रेनमा टाउको दुखेसँगै विरामीको शरीरको एक भाग चल्दैन र, टाउको दुखाई कम भएपश्चात्त स्वतः कम भएर जान्छ । तर, त्यो समस्या विरलैलाई हुन्छ ।
माइग्रेनका कारण गम्भीर डिप्रेसन भयो र डिप्रेसनका कारण मानिसको मृत्यु भयो भने त्यो छुट्टै कुरा भयो । तर माइग्रेनकै कारण भने मृत्यु हुँदैन ।
नेपालमा माइग्रेनको अवस्था
अन्य देशहरुमा भन्दा नेपालमा माइग्रेनको अवस्था खासै भिन्न छैन । अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा आउने समस्याहरुमध्ये सबैभन्दा बढी माइग्रेन नै हुन्छन् । माइग्रेन पनि विभिन्न प्रकारहरु छन् । सामान्यतयाः माइग्रेनलाई एपिसोड अनुसार दुई भागमा विभाजित गरिन्छ । सामान्य माइग्रेन र क्लासिकल माइग्रेन ।
सामान्य माइग्रेनमा विरामीलाई महिनामा १५ चोटिभन्दा कम अट्याक आउने गर्छ । कसैकसैलाई धेरै पनि हुनसक्छ । जबकी विरामीलाई क्लासिकल माइग्रेनको समस्या भएमा उनीहरुमा भिजुयल लक्षण देखा पर्ने गर्छ । जस्तै, आँखाअगाडि चहकिलो लाइट फ्यास भएको महसुस हुने गर्छ । त्यसपछि विस्तारै टाउको भारी हँुदै टाउकोमा असह्य पीडा हुनसक्छ ।
यसबाहेक, कयौ मानिसलाई महिनामा १५ पटकभन्दा बढी माइग्रेनको अट्याक हुन्छ, जसलाई चिकित्सकीय भाषामा क्रोनिक माइग्रेन भनिन्छ । त्रि. वि. शिक्षण अस्पतालको बहिरङ्ग सेवामा दैनिक ६ देखि सात जनाको हाराहारीमा माइग्रेनका विरामी आउने गर्छन् ।
–पटक पटक टाउको दुख्ने
–टाउको दुखाई लामो हुने (केही घण्टादेखि सुरु भएर केही दिनसम्म रहेमा)
–टाउकोमा अप्ठेरो महसुस हुने
–टाउकाको टन टन भएर दुख्ने
त्यस्ता खालका दुखाई भएमा कतिपय मानिसहरुलाई वान्ता हुनसक्छ । कतिपयलाई चक्कर लाग्ने, रिङ्गटा लाग्ने, ठूलो स्वर सुन्न मन नलाग्ने, बोल्न मन नलाग्ने लगायतका समस्या निम्तन सक्छ । जुन धेरै बेरसम्म रहिरहन्छ । यस्ता लक्षण माइग्रेनको टिपिकल लक्षण भएकोले यो समस्या पटक पटक दोहरिइरहेमा तुरुन्तै नशा रोग विशेषज्ञसित परामर्श गर्न आवश्यक छ ।
कसैको टाउको दुखाई समय अनुसार बढ्दै गयो वा छिटो–छिटो दुख्न थाल्यो भने पनि त्यसले घातक कारणको संकेत गर्छ
माइग्रेन र घातक टाउको दुखाई
कुनै पनि मानिसलाई ४० वर्ष पश्चात्त टाउको दुख्न सुरु हुन्छ भने त्यो घातक टाउको दुखाई हुनसक्छ । किनभने माइग्रेनको समस्या सामान्यतया १५ वर्षको उमेरदेखि ४० वर्षसम्म मात्र हुने भएकोले एउटा फिजिसियन वा एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले पनि यो कुरा छुट्याउन आवश्यक छ ।
विशेषगरी, टाउको दुखाई पहिलो हो र बेस्सरी दुखेको छ भने त्यसलाई सामान्यरुपमा लिनु हुँदैन । त्यो जहिले पनि ब्रेन हेमरेज, सब–एरेक्नोइड हेमरेजका कारण हुने गर्छ । अर्को, कसैको टाउको दुखाई समय अनुसार बढ्दै गयो वा छिटो–छिटो दुख्न थाल्यो भने पनि त्यसले घातक कारणको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, टाउको दुखाईसँगै कसैलाई ज्वरो पनि आइरहेको छ भने त्यो मेनेन्जाइटिस वा ब्रेन टिभीको संकेत हुनसक्छ । त्यस्तै कसैलाई टाउको दुखेको पनि छ र एक साइड नचल्ने वा बढी झमझम गर्छ भने त्यसले घातक कारणलाई संकेत गर्छ । त्यो प्राय मस्तिष्कघात वा ब्रेन ट्युमरमा हुनेगर्छ ।
यसबाहेक, यलि टाउको दुखाईसँगै दुब्लाउदै गएको छ र खानामा पनि अरुची बढ्दै गएको छ भने त्यसले मस्तिष्कको क्यान्सरलाई संकेत गर्न सक्छ । त्यतिबेला हामी सतर्क हुनु पर्दछ । किनकी यसलाई ‘रेड फ्याग साइन इन हेडएक’ पनि भनिन्छ ।
(डा. रागेश कर्ण त्रि. वि. शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जका न्युरोलोजी विभाग प्रमुख हुन्) अनलाइन खबरबाट
मिर्चैयामा एक किशोरीमाथि सामुहिक बलात्कार, १ प्रहरी गिरफ्तमा, २ फरार
ड्यूटीमा रहेका बेला पनि उनलाई सलाम गर्छु, घरमा हामी दुवै बुवा–छोरी नै हुन्छौं’